DELTA: NDI NCHỊ EHI AGBAGBUELA NWA DIBIA OYIBO – hoo!haa!!
Ndi ana-enyo enyo dịka ndi Fulani na-achị ehi ma bụrụkwa ndi nke na-akpa ike n’akụkụ obodo ana-akpọ Obomkpa, n’okpuru ọchịchị ime obodo mgbago ugwu Anịọcha nke steeti Delta, ka-ekwuru na ha agbagbuela otu nwoke dibia oyibo na-arụ ọrụ n’ụlọ ọgwọ Federal Medical Centre Asaba. Ekwukwara na ha tọọrọ ndi enyi ya mmadụ nabọ ya na ha so eme njem na mgbede ụbọchị Tọsdee.
Akụkọ anyị nwetara na-ekwu na ndia ji ụgbọ-ala nwoke dibia oyibo a eme njem n’okpro ụzọ Obomkpa, were gbabara ndi nchị ehi buchaa nnukwu egbe AK47. Ha gbara mbọ ka ha gbanahụ ndi nchị ehi ahụ, mana ha enweghị ike.
Ha bidoro gbawa ha egbe. Ha gbagburu dibia oyibo ahụ ozigbo nje ahụ, ebe ndi enyi ya jisịrị ike buru ọnụ egbe agbara ha gbalaga.
Onye na-ahụ maka mmekọrịta ndi uwe ojii na ọhaneze ndi steeti Delta bụ Andru Anịamaka kwuru na nke a bụ ihe mere eme.
Anịamaka sịrị na ndi nchị ehi a kwuchiri nwoke a bụ Dọkịnta Enestị Oba mgbe ya na ndi enyi ya na-eme njem n’okporo ụzọ Obomkpa n’anyasị ụbọchị Tọsdee. Ọ sị na ndi nchi ehi ahụ na-akpakwa ike dịka ndi ntọrị mmadụ n’otu nje ahụ.
Ọ sịrị na ha gbagburu nwa dibia oyibo ahụ mgbe ya na ha kpọtụrụ nwa ganị ganị ma tọọrọkwa ndi nke ọzọ ya na ha nọ n’ụgbọ-ala. N’okwu ya, mgbe ndi na-agafe hụrụ nwoke dịbia oyibo a, ha gbara mbọ ibuga ya n’ụlọ ọgwụ ukwu bụ Ogwashị Uku General Hospital mana o mechara nwụọ.
Ọ sịrị na ha azọpụtala mmadụ abụọ ndi nke ọzọ ma butekwa ụgbọ-ala nwoke dibia oyibo a.
Rue na mgbe anyị na-aga n’igwe maka ibiputa akụkọ a, ekwubeghị aha mmadụ abụọ ndi a. Ha merụrụ nnukwu ahụ mana onye nke dibia oyibo bụ onye Ndokwa. Anọdebere ya nso ma gbaa ya egbe n’afọ nakwa n’isi, were hapụ ya n’ime ọbara ya. Nke a butere ọnwụ ya.
Mgbe ọ na-ekwe nkwa na aka ga-akpara ndi ntọ a, Anịamaka kpọkuru ọhaneze ka ha na-ewetara ndi uwe ojii ozi dịgasị añaa, nke ga-enye aka maka ijide ndi omekome na steeti ahụ.
Akụkọ kwuru na ndi ntọ ejirila ụzọ Obomkpa mere ebe obibi ha. Ekwuru n’isi nso a, na o ruela mmadụ isii atọọrọ n’ụzọ ahụ, mana emechara were ego gbapụta ha.
Previous Post: EBỌNYỊ: NDI NTOROỌBỊA NKE AGBỤRỤ NIILE NA-EKWU OKWU UDO…
Next Post: ONYE NNỌCHITE ANYA POOPU ETOOLA UGWUANYỊ